एउटा घर, एउटा कार र एउटा असल जीवनसाथी – Chitwan Post
एउटा घर, एउटा कार र एउटा असल जीवनसाथी
संसारमा जति पनि देशहरु छन् ती देशका जनताको आआफ्नै खालका सपना र चाहनाहरु होलान् । एक देशका जनताको चाहना र अर्को देशका जनताको चाहनामा फरकपन त अवश्य हुन्छ नै । युरोपका मानिसहरु धन खर्च गर्नका लागि कमाउँछन् । उनीहरु मेहनत गरेर पैसा कमाउँछन् र मिलाएर खर्च गर्छन् । यो मामलामा अमेरिकी नागरिकहरु पनि उस्तै छन् । आज विकसित कहलिएका जापान, अस्ट्रेलिया र क्यानडाका मानिसहरु पनि खर्च गर्नकै लागि धन कमाउँछन् । तर, धन कमाउने र खर्च गर्ने मामलामा नेपालीहरु अल्लि फरक देखिएका छन् । अपवाद जहाँ पनि हुन्छ । अपवादलाई छाडेर प्रायः नेपाली नागरिकहरुले पैसा कमाउनुको अर्थ बंैकमा लगेर जम्मा गर्नका लागि हो भन्ने किसिमले बुझेको पाइयो । यही कारण हो आज नेपालमा जति पनि बैंकहरु खुलेका छन्, सबै बैंकमा पैसा छ तर तिनीहरुले लगानी गर्ने शीर्षक र लोन लिएर उद्योगधन्दा चलाउने मानिस पाएका छैनन् । धन प्रयोग गर्नुपर्छ, लगानी गर्नुपर्छ भन्ने थाहा नभएर वा जम्मा गर्दा नै आत्मसन्तुष्टि मिल्छ भन्ने चिन्तनका कारणले हो आज देशका तमाम नागरिकहरु विनाकाम बसेका छन् । धन भएकाहरु बैंकमा थुपारेर बसेका छन्, दैनिक कमाउनेहरु पनि जम्मा भएको धन कतै लगानी गर्नेतर्फ नगइ केवल बैंकमै थुपार्न कम्मर कसेर लागेका छन् । अब धन कमाउने र खर्च गर्ने वा लगानी गर्ने मामलामा विकसित देशका नागरिकहरुले धन ठीक तरिकाले प्रयोग गरेको देखियो, तर हामीले धन ठिक तरिकाले प्रयोग गर्न सकेनौँ । पैसा जति प्रयोगमा रहन्छ त्यति आर्थिक चलखेल हुन्छ । आर्थिक चलखेलले रोजगारी सिर्जना गर्छ, हरेकले हरेक प्रकारको खाँचो र आवश्यकता पूर्ति गर्न सक्छ, तर नेपालमा पैसा चलेन, चलाइएन अर्थात् प्रयोगमा ल्याइएन । यही कारण आज धेरै कारणमध्ये यो एउटा कारण बन्यो, मुलुक अघि नबढ्नका लागि ।
अब अन्य राष्ट्रका नागरिकहरुले जीवन व्यतीत गर्न के चाहन्छन् त्यो उनीहरुकै विषय भयो । हाम्रो विषयचाहिँ के हो भने हामी नेपाली नागरिकहरुको साझा चाहना के बन्न पुग्यो भने जसरी पनि जुनसुकै हालतमा पनि एउटा घर चाहियो, त्यो पनि ढलान गरेर बनाएको घर चाहियो । यही चाहना पूर्ति गर्नका लागि नागरिकहरु उस्तै परे चौबिसै घन्टा पैसा कमाउन कुद्ने अवस्थामा पुगेका छन् । कोही सीधा तरिकाले घर बनाउन कोसिस गरिरहेका छन् त कोही बांगो तरिका अपनाइरहेका छन् । सीधा तरिका भनेको इमानदारितापूर्वक सानोतिनो व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गरेर सरकारलाई कर तिरेर रकम कमाउन लागेका छन् । कोही मेहनत मजदुरी गरेर सानो–सानो रकम जम्मा गर्नतर्फ लागेका छन् । कोही जागिरे दैनिक खर्चमा कटौती गरेर रकम जम्मा गर्दै घर बनाउने सपना देखिरहेका छन् । कोही चोरी, डकैती र तस्करी गरेर भए पनि घर बनाउन दाउ हेरिरहेका छन् । यहाँसम्म कि महिनामा १५ हजार कमाउने टेम्पो चालक वा चना चटपट र हरियो मकै पोलेर सानो–सानो रकम जम्मा गर्नेहरु समेत एउटा घर बनाउने सपना देखेर कुदिरहेका छन् । जसको घर पहिले नै छ उसले नयाँ वा ठूलो घर बनाउने सपना साँचेको छ र पैसाका लागि कुदेको छ । पैसा यसरी वा उसरी होइन त्यही घर बनाउने सपना पूरा गर्नका लागि जुनसुकै तरिका अपनाउन मान्छेहरु तयार देखिन्छन् । अब यो अवस्था भनौँ वा नेपाली चाहना र सपना नेपाल सरकारलाई थाहा नभएको होइन, राम्रैसँग थाहा छ । यो घर बनाउने नेपाली सपना आखिरमा गएर देशले धान्नै नसक्ने खालको बोझ बन्ने निश्चित छ ।
पक्की घर बनाउन रड, सिमेन्ट, बालुवा, बिजुलीका तार, ट्वाइलेट, बाथरूमका लागि अनेक नाम र आकारका सामान चाहिन्छ । अपवादलाई छाडेर यी सबै सामग्री विदेशबाट आयात गर्नुपर्छ । विदेशबाट सामान भित्र्याउनुको अर्थ स्वदेशी धन विदेशिनु हो, यो सत्य सबैलाई थाहा नभए पनि धेरैलाई थाहा छ । एकातिर कमजोर आर्थिक हैसियतवाला देश, त्यसमाथि स्वदेशी धन लगातार बाहिरिने समस्याले नेपाललाई पार्नसम्मको नोक्सानी पार्ने निश्चित छ भने बनेका घरहरु नै कालान्तरमा घाँडो सावित हुनेछन् । आउने समस्या समाधानका लागि अब नेपाल सरकारले घर नीति र भू–उपयोग नीति तुरून्त लागू गर्नुपर्ने छ । जथाभावी खेतीयोग्य जमिनमा घर बनाउँदा र जहाँ पायो त्यहीँ घर बनाउँदा एकातिर खेतीयोग्य जमिन विनास भई अन्न, तरकारी र फलफूल कमी हुने अवस्था आउने, यो समस्या समाधान फेरि सजिलो नहुने हँुँदा सरकार तुरून्त सचेत हुन जरूरी छ । अब यदि सरकारले घर नीतिअन्तर्गत कतिसम्मको अग्लो घर बनाउन दिने, कुन स्थानलाई बसोबास क्षेत्र घोषणा गर्ने र कुन–कुन क्षेत्रलाई अन्न, फलफूल र तरकारी उत्पादनको क्षेत्र घोषणा गर्ने भन्ने काम गर्न ढिलाइ ग¥यो भने जनताको “एउटा घर”वाला सपनाले देशलाई ठूलो टाउको दुखाइ थप्ने देखिन्छ ।
अर्को नेपाली सपना हो, एउटा निजी कार । हुन त, सपना देख्न जसले पनि पाउँछ । सपना देख्न प्रतिबन्ध लगाउन सकिन्न । सपना देख्नेहरुलाई कानुनी कारबाही गर्न पनि मिल्दैन । तर, गहिरिएर विश्लेषण गर्ने हो भने यो नेपाली “एउटा निजी कार”वाला सपनाले देशलाई पार्नसम्मको चोट पार्ने निश्चित छ । आजैको दिनमा नेपालभित्र ल्याइएका कारको संख्या गनेर हेरौँ । जजसको एउटा निजी कारको सपना पूरा भएको छ त्यो सपनाले नेपालका बाटाघाटा टनाटन भरिएका छन् । अब कार पार्किङको समस्याले विकराल रुप लिइसकेको छ । एकातिर कार पार्किङ गर्ने ठाउँ छैन, जथाभावी कार पार्किङ गर्दा ट्राफिक प्रहरीले साङ्ला लगाएर ताल्चा ठोक्न थालेको छ । जब एकपटक ताल्चा ठोकिन्छ १५ सय रूपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्छ । कार चढ्ने रहर गर्दा वार्षिक कर तिर्नुपर्ने अतिरिक्त खर्च छँदैछ । उसै त गरिब देश, यस्तो देशका युवायुवतीहरु जो विदेशमा पसिना बगाएर नेपालमा पैसा पठाउँछन्, त्यही पैसाले किनेको पेट्रोल कारलाई खुवाउनुपर्छ । पार्टपुर्जा नयाँ जडानको कुरा बेग्लै छ । यसरी जुनसुकै कोणबाट हेर्दा पनि नेपाललाई घाटा पार्ने यो “एउटा निजी कार”वाला सपना जजसको पूरा भएको छ, पूरा भएका सपनाले यतिविघ्न कष्ट दिएको छ भने अझै यो सपना पूरा गर्न चाहने नेपालीको संख्या हजारौँ होइन लाखौँ छ । यी लाखौँ मान्छेका निजी कारवाला सपना पूरा हुने हो भने यो देशको हालत कस्तो होला, सम्झिँदा पनि चक्करै लाग्छ ! कार पार्किङ गर्ने ठाउँ नभएर अमेरिकामा घरको छतमाथि कार पार्किङ स्थल बनाइएका फोटाहरु सार्वजनिक भएका छन् । अब के हामी पनि ठूला–ठूला घर बनाएर घरमाथि कार पार्किङ गर्ने ?
एउटा घर र एउटा कारवाला नेपाली साझा सपनाले आज नेपाललाई सर्लक्कै निल्न लागेको छ । यी डरलाग्दा नेपाली सपनालाई सरकारले आजसम्म ठीक तरिकाले व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन भने एउटा गतिलो जीवनसाथीवाला सपना पनि यतिबेला आएर घाँडो सावित हुन पुगेका छन् । हो, निश्चितरुपमा अविवाहित युवा वा युवतीले प्रकृतिको विशेषताअनुरुप एउटा गतिलो जोडीको सपना देख्छन् । तर, हिजोआज देशभरिका अदालतहरुमा सम्बन्धविच्छेदका मुद्दाहरुको संख्या र भएका सम्बन्धविच्छेदका संख्या गन्दा “एउटा गतिलो जीवनसाथी”वाला सपना पनि तुहिएको अवस्था देखिन्छ । नेपालमा व्याप्त गरिबी, काम गरिखाने खालको शिक्षा नभई गफ गरिखाने खालको शिक्षा पद्धति, मै खाऊँ, मै लाऊँ, ममात्रै बाचौँ, चरम बेरोजगारी, देशभित्र प्रगति भएको समाचारको दाँजोमा बिग्रिएको, भत्किएको र नासिएको मात्रै समाचार आउनु आदिका कारण चरम नैराश्यता उत्पन्न आदि कारणले विवाह भएको केही समयभित्रै श्रीमान्श्रीमतीबीच असमझदारी उत्पन्न हुनु र यो असमझदारी बढ्दै जाँदा अदालतमा गएर मुक्ति खोज्ने खालको अवस्थाले आज नेपालमा “एउटा गतिलो जीवनसाथी”वाला सपना पनि चकनाचुर भएको अवस्था छ । यो अवस्थामा सुधार आउने कुनै छेकछन्द देखिँदैन, बरू प्रत्येक दिनका अखबारका पानाहरु सम्बन्धविच्छेदका समाचारले भरिन थालेका छन् ।
आजको नेपालमा एक वा दुई कारणले नभई धेरै कारणले यो देशको समृद्धिमा तगारो तेर्सिएको छ । यहाँ र त्यहाँ नभई नेपालभित्र जताततै प्रायः जुनसुकै शीर्षकमा आर्थिक भ्रष्टाचार भएको छ । भ्रष्टाचारले देशको ढाड भाँचेको छ भने संसारमा राजनीतिक क्रान्तिहरु हुन्छन् र कुनै कालखण्डमा गएर सकिन्छन्, तर यो देशमा त २००७ सालदेखि सुरू भएको राजनीतिक आन्दोलन र खिचातानी आजसम्म सकिएन । राजनीति सङ्लो नहुँदा अरु चीज सङ्लिएनन् । समस्या घट्लान् भन्दा झन् बढ्न थाले । अरु समस्याहरु त यथावत् छन् नै, नेपाली जनताका एउटा निजी घर, एउटा कार र एउटा असल जीवनसाथीवाला सपना पनि अनेक–अनेक कारणले समस्याकै रुपमा देखिएको छ । एउटा कोणबाट हेर्दा सरकारले जनताको सपनालाई सम्मान गर्नुपर्छ, तर जनताको सपना पूरा गर्नतर्फ लाग्दा देश नै चल्न सक्दैन भने त्यस्तो अवस्थामा सरकारले जनतालाई घर र कारवाला सपनाको नयाँ विकल्प प्रस्तुत गर्नुपर्छ । असल जीवनसाथीवाला सपनाका लागि पनि अनुशासन, नैतिकता र कर्तव्यको पाठ सिकाउने उपायका साथ “जिउने कला”समेत सिकाउने हो भने सायद् एकले अर्काको भावनाको कदर गर्ने संस्कार स्थापित हुन सक्छ र यसले मात्रै आज विकराल रुपधारण गर्दै गरेको सम्बन्धविच्छेदको संख्यालाई घटाउन सक्छ ।